Daruurow iyo Alshabaab – Kaasho Maanka
Daruurow isaga oo yar buu Qur’aanka xafiday, waxa uuna tukashada bilaabay isaga oo jira saddex iyo toban, laakiin nasiib darro waxa ay salaaddii ka jabtay afar sano ka dib. Sidee bay salaaddu uga jabtay? Soomaalida qaarkood qofku haddii uu isaga oo tukada sino ku dhaco waxaa la aamminsan yahay in aan salaad danbe laga aqbalayn.
Daruurow oo jooga siyaaro habeenno lagu dhafro ayey dhallinyaro rag iyo dumar ahi meeshii siyaarada agteeda caweys ciyaareed ku qabsadeen, waxa uuna gelin danbe oo habeen ah gooni u la baxay gabar naaso waaweyn oo la moodey in ay isaga ka da’ weyneyd, cabbaar markii ay sheeko iyo salaax ku jireen buu Eebbe isu calfay oo labadooda xubnood oo ay ka kaadshaan isku hubsadeen. Mucjisooyinka raaxada fududeeya waxaa ka mid ah in aysan gabadha loo galmoonayaa bigro ahayn, Kutubey oo uu habeenkaas Daruurow lugeheeda dhex galayna ma ay tolnayn. Waxaa kale oo mucjisooyinka ka mid ahaa in ay labada qof oo raaxaystay isgaranayeen oo aysan ka mid ahayn dadka siyaarada meelaha fogfog uga yimid.
Daruurow habeenkii ay salaaddu ka jabtay ka dib kitaab ma uu taaban oo waxaa la aamminsan yahay qofkii ay salaaddu ka jabtaa in uusan kitaab taaban karin, laakiin subacyada Qur’aanka waa uu ka qaybgeli jirey, waayo ninka ay salaaddu ka jaban tahay Qur’aanka dusha waa uu ka akhriyi karaa. Isaga oo sidii ay salaaddu uga jabtay aan kubkiisa weeso marin bay tuuladii Ashabaab qabsadeen! Dadkii tuulada degganaa oo dhan waxaa lagu khasbay in ay tukadaan, waxa uuna Daruurow sheegay in ay salaaddu ka jaban tahay. Markii ay Ashabaab baaritaan sameeyeen waxaa soo baxday in uu Daruurow sinaystey. Ashabaab oo jecel in ay dad xadka shareecada ka oofiyaan waxa ay weydiiyeen labo su’aalood oo ka la ahaa in uu sinadaas ka hor dumar guursadey iyo in uu garanayo gabadhii uu ka sinaystey. Nasiib wanaag caweyskii siyaarada ka hor iyo ka dib naag ma uu guursan oo weligiisba habeenkaas ka hor lugo dumar dhexdood ka ma nuuxnuuxsan, laakiin nasiib darro gabadhii waa uu garanayey oo isla tuulada ayaa lagu qabey oo hal ilmo ah iyo uur bay lahayd. In kasta oo uu gabadha garanayey haddana waa uu diidey in uu sheego midda ay tahay, laakiin jirdil iyo cadaadis badan ka dib gabadhii waa uu facsharay.
Daruurow waxaa loo sheegay in uu khasab ku tukado iyo in boqol jeedal lagu dhufanayo, mana uu fahmin sababta salaad ka jaban loo dirqiyey iyo sababta loo garaacayo. Marwo Kutubey oo uur lix bilood ah leh, ilma dhabta ku haysata oo uu ninkeedii la joogo ayey askartii Ashabaab cariishkeeda ugu galeen, waxa ayna ninkeedii u sheegeen in ay xaaskiisa kaxaysanayaan, ninkiina waxa uu u qaatay in ay naagta ka qaadayaan oo waxaa suuqa ku jirtey in ay Ashabaab rag ay gaalo ku sheegeen dumarkood hortooda ku guursadeen iyo in ay dumar afduubteen. Ninkii oo naxsan baa yiri ”Ar ani gaal ma ahi ee qofteyda ii daaya!”.
Waxaa loogu jawaabey ”Annagu gaal kugu ma sheegin ee xaastaadu denbi bay gashay”.
Ilmihii dhabta lagu hayey waxa ay Ashabaab u dhiibeen aabbihiis, waxaana Kutubey la geeyey meel ay Ashabaab saldhig ka samaysteen, waxaana la hor keenay Daruurow oo waxaa lagu yiri ”Ninkan habeen uu caweys jirey ma isu galmooteen?”.
Kutubey aad bay uga naxday runta sanaddada laga joogo oo miiska loo soo dhigay, wajigeediina ceeb buu la doorsoomay, laakiin inkiraad bay isku dayday. Daruurow xabsigii baa lagu celiyey, waxaana Kutubey lagu yiri ”Haddii aad run sheegtid waa lagu sii deynayaa, haddii kale se waa lagu xirayaa”.
Waxa ay tiri ”Ar ninkeyga ha u sheeginnina run waayee!”.
Markaas ka dib waxaa la weydiiyey in ay habeenkii caweyska ka hor guur soo martay, waxa ayna sheegtay in uu aabbeheed nin ku khasbay iyada oo yar oo habeenkii caweyska ay ninkaas ku mehersanayd, la mana weydiin in uu ninku ahaa midka qaba iyo in kale, waayo Ashabaab taas dan ka ma lahayn.
Daruurow markii meesha bannaan lagu jeedlayey waxaa u soo daawasho tegey boqollaal qof, mar kasta oo uu jeedal ku dhacana waxa ay Ashabaab la qaylinayeen ”Allaahu akbar”. Kutubey waxa uu shiikhii Ashabaab xukumey iftooday in aan dhagax lagu dili karin iyada oo uur leh ee markii ay dhasho la dili karo, laakiin shiikh kale ayaa ka daba hadlay oo sheegay in laga yaabo in ay dowladda federaalka ahi Ashabaab tuulada ka qabsadaan iyada oo aan Kutubey la medin, waxa ayna Ashabaab ugu danbayn go’aan ku gaareen in uurkeeda lagu dilo. God dheer baa la qoday oo Kutubey lagu xabaalay oo madaxa iyo surka keli ah laga soo jeediyey iyada oo calool weyn, waxaana madaxa laga la dhacay dhadhaab waaweyn oo markii mid lagu dhuftaba la la qaylinayey ”Allaahu akbar”.
W/Q: Qoraa Dahsoon 12th February 2020